गोंगबु घटना: फेसबुकबाटै चिनजान, फेसबुककै कारण हत्या….(भिडियो सहित) « Nepal's number 1 Entertainment news portal
गोंगबु घटना: फेसबुकबाटै चिनजान, फेसबुककै कारण हत्या….(भिडियो सहित)
Published : 11 August, 2020 8:45 pm
गोंगबुमा आइतबार बिहान सुटकेशमा श व फेला परेका दाङका कृष्णबहादुर बोहोराको अण्ड’कोषमा हानेर ह त्या गरेको खुलेको छ।महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय अपराध महा’शाखाले मंगलबार संयुक्त पत्र’कार सम्मेलन गरेर बोहोराको ह त्यामा संलग्न भएको आरोपमा प क्राउ परेकी कल्पना मुडभरी पौडेललाई सा’र्वजनिक गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले कल्पना र कृष्णबहा:दुरबीच तीन-चार वर्षअघि फेसबु’कबाट चिनजान भएको जानकारी दिए। चिनजा’नपछि उनीहरू नजिक भए। पत्रकार सम्मेलन‘पछि कृष्णबहादुरले नक्क’ली फेसबुक एकाउन्ट बनाएर महिलाका निर्वस्त्र तस्बिरहरू राख्न थालेको उनले बताएकी छन्,’ एसएसपी ज्ञवालीले भने,‘केही दिनअघि उनले कृष्णबहादुरलाई दहीमा हालेर स्लि’पिङ ट्याबलेट खुवाएको र सुतेपछि अ’ण्ड कोषमा हानेर मा’रेको स्वीकारेकी छन्।’ सुटकेशमा श’व भेटिएपछि प्रहरीले अप’रेशन जो जो नाम दिएर उक्त घट’नाको अनुसन्धान थालेको थियो। जो जो कुकुर हो। उसले श वको टाउको खुट्टा फेला पारेको थियो।
महाशाखाका एसएसपी दीपक था’पाका अनुसार ह त्यापछि श’व व्यवस्थापन गर्न पौडेलले टाउको र खुट्टा काटेकी थिइन्। ‘श व फालेर उनी माइती जान्छु भन्दै एम्बुलेन्समा चितवन गएको देखिन्छ,’ एसएसपी थापाले भने। प्रह’रीले उनलाई सोमबार साँझ चितवनबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको हो। ‘ह त्याको मुख्य कारण यौ’न शोषण र नां’गो तस्बिर फेसबुकमा हालेको भन्ने नै देखिन्छ,’ उनले भने। – यो खबर प्रकाश ढुंगाना र युनिक श्रेष्ठले सेतोपाटीमा लेख्नु भएको छ ।